HAMAKY AMIN'NY TENY Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Holandey Hongroà Icibemba Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Vietnamianina Zoloa
“Izay rehetra alehanao dia ahitanao ankizy mampiaraka. Lasa te hampiaraka koa ianao. Ny ankizilahy koa moa bôgôsy be daholo!”—Hoby.
“Tonga dia mitory fitiavana tsotra izao ny ankizivavy sasany. Te hanaiky aho indraindray. Raha hiera amin’ny dada sy mamanay anefa aho, dia efa haiko ny holazainy.”—Fano.
EFA nisy olona tianao ve? Na nilaza fa tia anao? Tena te hiaraka aminy ianao, na dia mbola kely aza. Hoy i Jennifer: “Vao 11 taona aho dia efa te hanao sipa.” Hoy koa i Bako: “Hoatran’ny hoe ankizy hafahafa ianao any am-pianarana, raha tsy mampiaraka!”
Ary ianao? Efa mahazo mampiaraka ve ianao? Ity aloha misy fanontaniana mila valiantsika:
Inona no atao hoe “mampiaraka”?
Asio marika izay valiny marina:
Azo inoana fa tsy sarotra taminao ny namaly an’ilay fanontaniana voalohany. Mety ho nisalasala kely anefa ianao talohan’ny namaliana ny ambiny. Fa inona tokoa moa no atao hoe mampiaraka? Ny tiantsika horesahina dia hoe: Manao zavatra imbetsaka miaraka amin’ny ankizilahy na ankizivavy iray tianao, ary izy koa tia anao. Eny daholo àry no valin’ireo fanontaniana telo tetsy aloha. Efa mampiaraka ianareo raha mifaneho fitiavana, ary mifampiresaka foana. Marina foana izany na miresaka an-telefaonina fotsiny ianareo na mihaona mihitsy, ary na miafina na tsia. Efa afaka mampiaraka ve anefa ianao? Diniho ireto fanontaniana telo ireto, dia ho hitanao ny valiny.
Nahoana ianao no te hampiaraka?
Fomba ahafahan’ny mpifankatia mifankahalala bebe kokoa ny mampiaraka, ary tsy mampaninona izany any amin’ny tany maro. Inona anefa no tokony ho tanjona rehefa mampiaraka? Natao hanampiana azy ireo hamantatra izy io raha afaka ny hivady izy na tsia.
Marina fa heverin’ny tanora sasany ho kilalao ny hoe mampiaraka. Mahafinaritra azy fotsiny ny miaraka amin’ny ankizilahy na ankizivavy, fa tsy mieritreritra ny hanambady izy. Misy aza te hampideradera fotsiny hoe azony ny ankizilahy na ny ankizivavy niriny. Ny hafa indray te hisongadina. Tsy tena tia an’ilay olona iarahany anefa ny tanora toy izany, ka matetika no tsy maharitra ilay fifandraisana. Hoy i Anja: “Herinandro na tapa-bolana dia misaraka ny tanora maro mampiaraka. Mieritreritra ry zareo fa tsy natao haharitra ny fiarahan’olon-droa. Toy ny hoe miomana ho amin’ny fisaraham-panambadiana izy, fa tsy ho amin’ny fanambadiana.”
Tena misy vokany eo amin’ny olona iarahanao izay ataonao. Mitandrema àry sao milalao fitia. Eritrereto izao: Tianao ve raha hataon’ny olona toy ny kilalao fotsiny ny fitiavanao? Lalaovin’ny ankizy vetivety fotsiny ny kilalao omena azy, ary ariany avy eo. Hoy i Fitia: “Mieritreritra aho indraindray hoe fialam-boly mahafinaritra fotsiny izany mampiaraka izany. Tsy mahafinaritra mihitsy anefa ilay izy, rehefa milalao fotsiny ny anankiray nefa ny iray tena tia.”
Fa firy taona moa ianao no te hampiaraka sahady?
Firy taona ny tanora vao afaka mampiaraka, araka ny hevitrao? ․․․․․
Apetraho amin’ny ray aman-dreninao io fanontaniana io, ary soraty eto ny valin-teniny. ․․․․․
Mety ho kely noho ilay isa faharoa ilay isa voalohany nosoratanao. Raha tsy izany, dia angamba ianao anisan’ireo tanora tsy maika ny hampiaraka, fa miandry ho lehibe kokoa ka efa mahafantatra tsara ny tenany. Izany no nataon’i Danielle, 17 taona. Hoy izy: “Raha nitady vady aho tamin’ny roa taona, dia tsy ho nitovy mihitsy tamin’ny ankizilahy tiako tamin’izany ny tiako amin’izao. Ary na hatramin’izao aza, dia mbola tsy haiko tsara hoe hoatran’ny ahoana ny vady tiako. Hiandry kely aho, ka rehefa hitako hoe tsy miovaova intsony aho vao hieritreritra ny hampiaraka.”
Misy antony hafa koa mahatsara ny miandry. Misy teny hoe “fotoana fivelaran’ny fahatanorana”, ao amin’ny Baiboly. Manomboka maniry mafy hitia olona sy hanao firaisana ny tanora, amin’io fotoana io. (1 Korintianina 7:36) Raha mifankazatra be amin’ny ankizilahy na ankizivavy iray ianao amin’izay, dia hihamafy ny fanirianao, ka mety ho resin’ny fakam-panahy haloto fitondran-tena ianao. Marina fa tsy mampaninona ny tanora sasany izany. Maro aza no maika hanandrana hoe hoatran’ny ahoana izany manao firaisana izany. Aza manahaka azy ireo anefa! (Romanina 12:2) Mampirisika anao ‘handositra ny fijangajangana’ mantsy ny Baiboly. (1 Korintianina 6:18) ‘Hanalavitra ny nofonao ny loza’, raha avelanao ho tapitra ny “fotoana fivelaran’ny fahatanorana” vao mampiaraka ianao.—Mpitoriteny 11:10.
Efa vonona hanambady ve ianao?
Mandiniha tena tsara, alohan’ny hamaliana an’io fanontaniana io. Diniho ireto:
Fifandraisana amin’ny olona. Ahoana no fomba itondranao ny ray aman-dreninao sy ny mpiray tam-po aminao? Tsy mahafehy tena ve ianao matetika rehefa milaza ny hevitrao, ka mampiasa teny mahery na maneso? Inona no mety holazainy, raha hanontaniana momba izany izy? Izay fomba itondranao ny fianakavianao ihany mantsy no hitondranao ny vadinao.—Vakio ny Efesianina 4:31.
Toetra. Be fanantenana ve ianao sa mora kivy? Mahay mandefitra ve ianao, sa tsy manaiky mihitsy raha tsy ny sitraponao no atao? Tsy mora taitaitra ve ianao rehefa sendra olana? Manam-paharetana ve ianao? Miezaha hanana ny vokatry ny fanahin’Andriamanitra dieny izao. Hanampy anao izany, rehefa manambady ianao.—Vakio ny Galatianina 5:22, 23.
Vola. Mahay mitsitsy vola ve ianao? Sa mitrosa foana? Mateza amin’ny asanao ve ianao? Raha tsia, nahoana? Ilay asa ve no mahatonga izany, sa ilay mpampiasa? Sa kosa misy fanaonao na toetranao mila ovana? Raha mbola tsy hainao ny mitsitsy ny volanao, ahoana moa no hahaizanao izany rehefa manan-tokantrano ianao?—Vakio ny 1 Timoty 5:8.
Fivavahana. Raha Vavolombelon’i Jehovah ianao, inona no ataonao mba hifandraisana hatrany amin’Andriamanitra? Moa ve ianao mamaky Baiboly, mitory sy mampianatra, ary mandray anjara amin’ny fivoriana? Tokony ho tena tia an’i Jehovah ianao, mba ho vady tsara.—Vakio ny Mpitoriteny 4:9, 10.
Mahita ny ataon’ny ankizy ianao indraindray, na teren’ny namanao, ka te hampiaraka, nefa mbola tsy vonona. Toy ny mpianatra vao manomboka taom-pianarana ianao, nefa terena hanala fanadinana sahady. Tsy rariny izany! Mila fotoana ianarana lesona ianao, mba ho voavalinao tsara ireo fanontaniana any amin’ilay fanadinana.
Toy ny fanadinana ny mampiaraka. Tsy kilalao izy io, araka ny efa hitantsika. Alohan’ny hiarahanao amin’ny olona iray àry, dia mila fotoana ianarana “lesona” iray tena lehibe ianao. Inona izany? Ny fomba ifandraisana tsara amin’ny namana. Ho hainao kokoa any aoriana any, ny hampaharitra ny fifandraisanao amin’izay olona hitanao fa mety aminao. Maharitra mantsy ny tokantrano, rehefa mpinamana be ny mpivady.
Aza mihevitra hoe voateritery ny fiainanao, raha miandry kely ianao vao mampiaraka. Hahasoa anao kosa izany, satria afaka mankafy kokoa ny fahatanoranao ianao. (Mpitoriteny 11:9) Hanam-potoana hanatsarana ny toetranao ianao, ary indrindra ny fifandraisanao amin’i Jehovah.—Fitomaniana 3:27.
Afaka mifanerasera amin’ny ankizilahy na ankizivavy ihany anefa ianao. Rehefa manao fety, ohatra, dia miaraha maromaro, ary manasà ankizilahy sy ankizivavy. Tokony hisy olon-dehibe hanara-maso anareo. Hoy i Anita: “Mahafinaritra kokoa, rehefa maromaro no miaraka. Tsara kokoa ny mana-namana be dia be.” Hoy koa i Vony: “Tena tsara ilay miaraka maromaro, satria lasa mahafantatra olona samy hafa toetra ianao.”
JEREO ILAY BOKY TEO ALOHA, TOKO 29 SY 30, RAHA MILA FANAZAVANA FANAMPINY
Te hampiaraka ve ianao, nefa mitady hanafina izany amin’ny ray aman-dreninao? Misy vokany ratsy izany, tsy araka ny eritreretinao mihitsy.
‘Ny malina mandinika ny diany.’—Ohabolana 14:15
Mieritreritra ny hiaraka amin’olona iray sy hanambady azy ve ianao? Vakio ny 2 Petera 1:5-7. Mifidiana toetra iray ao, ary miezaha hanana izany. Rehefa afaka iray volana, dia jereo raha tsapanao hoe tena ilainao ilay toetra. Diniho koa hoe inona no ezaka efa vitanao mba hananana azy io.
Hita tamin’ny fandinihana maro, fa ao anatin’ny dimy taona dia mety hisara-panambadiana ny tanora, raha latsaka ny 20 taona no mivady.
Mila manana an’ireto toetra ireto aho, vao hanambady: ․․․․․
Izao no tokony hataoko mba hananana azy ireo: ․․․․․
Izao no hanontaniako ny ray aman-dreniko momba an’ireo: ․․․․․
● Tsy afaka mifanerasera amin’ny ankizilahy na ankizivavy mihitsy ve ianao? Hazavao.
● Inona no torohevitra omenao ny mpiray tam-po aminao, raha te hampiaraka izy, nefa mbola kely?
● Raha miaraka amin’ny olona iray ianao, nefa tsy mieritreritra ny hanambady azy, inona no mety ho vokany eo aminy?
[Teny notsongaina, pejy 18]
Tsy tokony hampiaraka ianao, raha tsy efa hainao tsara hoe tena tianao ilay olona, ary fantatrao fa haharitra ny fiarahanareo. Tokony ho ilay olona no ho tianao, fa tsy ny hoe hampiaraka fotsiny.’’—Oly
Raha mampiaraka ianao nefa tsy vonona hanambady, dia toy ny ankizy mahazo kilalao. Lalaoviny vetivety ilay izy, dia ariany
yp2 toko 1 p. 14-20